तिथि मेरो पत्रु »4धन्य सम्वन्धमा शक्तिशाली बानीहरु
के तपाईं कहिल्यै आफ्नो व्यवहार पैटर्न राम्रो वा नराम्रो लागि आफ्नो प्रेम जीवन प्रभावित बाटो मा प्रतिबिम्बित गर्ने समय लिएका छन्? कुरा तपाईंले सकारात्मक तरिकामा कि प्रभाव अनजाने आफ्नो सम्बन्ध के हो, तपाईं लागि दोस्रो प्रकृतिको कुनै प्रकारको भए केही दिनचर्या छन् जस्तै, तर आफ्नो साथी पागल ड्राइव. पहिलो व्यक्तिहरूलाई कायम राख्ने हो जबकि, तपाईं बानी को दोस्रो प्रकारको छुटकारा रही विचार र बानी मा मात्र खुसी सम्बन्ध बारी सफल केही अभ्यासहरू खेती सक्छ.
1. सम्मान संग आफ्नो साथी व्यवहार
आदर कुनै सम्बन्ध हुनुपर्छ एक घटक, हामी एक उच्च स्कूल टूट पडना बारेमा कुरा कि, एक एक रात अडान वा एक आकस्मिक डेटिङ. सम्मान संग आफ्नो साथी उपचार गर्दा एक गम्भीर सम्बन्धमा सर्वमहत्त्वपूर्ण हुन्छ, तपाईं एक जीवनकालमा स्थायी विवाह बारी गर्न चाहनुहुन्छ विशेष गरी भने. आदर देखाउँदै देखाउने प्रेम बराबर, बस आदर तेरा अनुमोदन व्यक्त अर्थ आफ्नो साथी उपचार रूपमा छैन, भरोसा वा स्वीकृति को आफ्नो कमी.
तिनीहरूलाई देखाउने आफ्नो साथी मतलब सम्मान गर्ने उनीहरूले छन् जो तिनीहरूलाई माया. तपाईं जीवन मा विभिन्न विचार हुन सक्छ, तर यो तपाईं उहाँलाई अनादर गर्ने हक भन्ने होइन / उनको. यो तपाईं को दुई कुरा असहमत विशेष गरी जब तपाईं मनमा राख्नुपर्छ कुरा हो. झगडे, पनि सबै भन्दा नगण्य व्यक्तिहरूलाई, यो क्षण युगल अक्सर तिनीहरूले वास्तवमा एक टीम हो र जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ बिर्सन जब छन्.
2. जानुहोस् लागि हात चल्छ
यो बानी आफ्नो मूड मा एक विशाल प्रभाव हुनेछ, आफ्नो स्वास्थ्य मा साथै आफ्नो सम्बन्ध मा. यो अघि वा कार्यालयमा एक आसीन दिन र एक दम्पतीको रूपमा केही समय गुणवत्ता खर्च गर्ने मौका पछि केही कसरत मौका छ. यो आफ्नो दैनिक घरधन्दा तोड्न र सँगै आफ्नो टाउको खाली गर्न तपाईं सफल समय छ हात हिंड्नु हात पनि राम्रो कुराकानी बढावा.
3. सँगै दूर टीवी देखि साँझ खर्च
टिभी हेर्ने सबैभन्दा लोकप्रिय हुन सक्छ (सबै भन्दा छैन भने) खाली समय गतिविधि, तर यो पक्कै पनि एक दम्पतीको रूपमा तपाईंलाई मदत गर्दैन. टिभी वास्तवमा सबै ध्यान खिच्छ, एक संचार डाट रूपमा अभिनय. टिभी हेरेर गर्दा कसरी संभवतः प्रत्येक अन्य संग कनेक्ट गर्न सक्छन्? कसरी टिभी बन्द बारेमा (कम से कम समय देखि समय), र दम्पतीको रूपमा केही समय गुणवत्ता खर्च? तपाईं आफ्नो दिन कुरा सक्छ, तपाईं सोफा मा सहारा लेना सक्छ, आफ्नो पहिलो दिन सम्झना वा आफ्नो अर्को छुट्टी योजना. तपाईं को दुई जान्छ केन्द्रित कि कुनै.
4. आफ्नो साथी को लागि राम्रो सङ्केत बनाउन
कसरी बिहान आफ्नो पति कफी कुराको बारेमा? अथवा नुस्खा लागि आफ्नो आमा पुकारा र आफ्नो मनपर्ने बाल्यकाल पकवान खाना पकाउँदै? कसरी उनको मनपर्ने केक आफ्नो प्रेमिका खरीद बारे? अथवा अझ राम्रो, उनको लागि यो पाक? यो ठूलो कुरा हुन छैन. लघु राम्रो सङ्केत प्रेम र आदर आफ्नो भावना व्यक्त. प्रत्येक अन्य लागि नोट छोड्ने वा खोल्नको तपाईं उहाँलाई सम्झना भन्न / उनको एक पटक एक समय मा एक सकारात्मक बाटो आफ्नो सम्बन्ध मा प्रभावित गर्न सक्छन् भन्ने बानी हो.